ပြည်တွင်းသတင်း Archives - MM Live News
18-9-2019မှာဖွဈ​ပှားတဲ့ ကြောကျ​ပနျးတောငျးမွို့နယျ​ နှဈ​ကပျြ​ခှဲကြေးရှာက စိတျ​ဝငျ​စားဖှယျ​လူသတျ​မှုပါ လူမှုရေးဖောကျ​ပွနျ​မှု ကိစ်စကွောငျ့​တဲ့ ၁၈.၉.၂၀၁၉ရကျ နနေံ့နကျ၅နာရီ၄၅မိနဈအခြိနျ မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး၊ညောငျ​ဦးခရိုငျ ၊ကြောကျပနျတောငျးမွို့မရဲစခနျးတှငျ ဒုရဲမှုးခငျမောငျထှေးစခနျးမှုးမှ တာဝနျထမျးဆောငျနစေဉျ….. ဦးမောငျခမျြး(၃၀)နှဈ၊သံပနျးသံတခါးလုပျ၊တောငျခငျကြေးရှာ၊ကြောကျပနျတောငျးမွို့နယျနထေိုငျသူက ၎င်းငျးသညျ၁၈.၉.၂၀၁၉ရကျနေ့ နံနကျ၁နာရီ၃ဝအခြိနျတှငျ နအေိမျတှငျအိပျပြျောနစေဉျ … ကြောကျပနျးတောငျးမွို့နှဈကပျြခှဲရှာနေ ဆှမြေိုးတျောစပျသူ မဇာဇာ(၂၇)နှဈမှ တရားလို၏အကိုတျောစပျသူ ကိုဖွိုး(ခ)ဖွိုးကိုကို(၃၄)နှဈ၊ယာဉျနောကျလိုကျ….. နှဈကပျြခှဲကြေးရှာ၊ကြောကျပနျတောငျးမွို့နယျနသေူသညျ ၎င်းငျးနထေိုငျရာနအေိမျအခနျးအတှငျး၌ အရိုကျခံနရေကွောငျးဖုနျးဆကျ အကွောငျးကွားသဖွငျ့သှားရောကျကွညျ့ရှုရာ….. အကိုဖွဈသူ ကိုဖွိုးမှာနအေိမျခွံဝငျးအတှငျး အဝငျပေါကျနှငျ့ (၃)ပခေနျ့အကှာတှငျ ဓားဒဏျရာမြားရရှိကာမှောကျလကျြ အနအေထားနှငျ့သဆေုံးနသေညျကိုတှရှေိ့ရသဖွငျ့မေးမွနျးရာ….. ဖွိုးကိုကို၏ ဇနီးဖွဈသူ မဝါဝါခိုငျသညျ လှနျခဲ့သော(၂)လခနျ့က ခငျြးပွညျနယျ၊ ဖလမျးမွို့နယျသို့ တာဝါတိုငျဆောကျလုပျရေး အလုပျသမားအဖွဈသှားရောကျအလုပျလုပျရာမှ ၁၀.၉.၂၀၁၉ရကျနတှေ့ငျနအေိမျသို့ပွနျရောကျစဉျ မငျးမငျးဦး(၂၀)နှဈ….. နရေပျစုံစမျးဆဲဆိုသူပါလာကာ တညျးခိုနထေိုငျလကျြရှိနခေဲ့ကွောငျးနှငျ့ ၁၈.၉.၂၀၁၉ရကျနံနကျ၁နာရီ၃ဝအခြိနျ​ ဇနီးဝါဝါခိုငျနှငျ့လငျမယားနှဈဦးအိပျပြျောနစေဥျမငျးမငျးဦးကနအေိမျအတှငျးဝငျရောကျလာကာ ဖွိုးကိုကိုအားဓားနှငျ့ထိုးသဖွငျ့ဖွိုးကိုကထှကျပွေးခဲ့ရာ…. မငျးမငျးဦးကအနောကျကပွေးလိုကျလာပွီးနအေိမျခွံဝငျးတခါးပေါကျအရောကျတှငျ ထပျမံထိုးသဖွငျ့လဲကသြဆေုံးသှားခဲ့ပွီး မငျးမငျးဦးနှငျ့မဝါဝါခိုငျတို့မှာ အခငျးဖွဈအရပျကနထှေကျပွေေးတိမျးရှောငျသှားသောကွောငျ့….. ကိုဖွိုးကိုကိုအားသဆေုံးအောငျဓားနှငျ့ထိုးသူကိုအရေးယူပေးပါရနျ ရဲစခနျးတှငျတရားလိုပွုလုပျတိုငျကွားခဲ့ရာ ကြောကျပနျတောငျးမွို့မရဲစခနျးမှ […]
ယုတ်မာသူတွေအတွက် တကယ့်တိုက်ပွဲမှာ ကျည်ကုန်ပစ်ဖို့ စုထားတယ်ဆိုတဲ့ ဆရာသက္ကမိုးညို Zawgyi ယုတ်မာသူတွေအတွက် တကယ့်တိုက်ပွဲမှာ ကျည်ကုန်ပစ်ဖို့ စုထားတယ်ဆိုတဲ့ ဆရာသက္ကမိုးညို ရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲသည် အောင်ကြီးကို ဆွဲထုတ်လာတယ်။ အင်မတန် အားနည်းတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေ ပြတယ်။ ဖြစ်နိုင်တာသည် ရဲတပ်ဖွဲ့အပေါ်မှာ တင်နေတဲ့ ၀န်ထုတ်ဝန်ပိုးကို တရားရုံးပေါ်မှာ တင်ပေးလိုက်တာပဲ။ နောက်ပြီးတော့ ရဲတပ်ဖွဲ့ကို လက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်သည် အွန်လိုင်းမှာ ပျံ့သွားတယ်။ သံသယ ဖြစ်ဖို့ ကောင်းတယ်။ ကလေးမိဘ တွေကတော့ ဖြန့်တာ မဖြစ်နိုင်။ ကျောင်း ကျောင်းမှာ ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျကြောင့် ကျောင်းသည် နှင်းနုနဲ့ ဆရာမတွေကို ထုတ်သုံးလာတယ်။ (ဘီဘီစီ အင်တာဗျူးတွေ) သူတို့ ထွက်မယ့် အချက်တွေသည် ဗစ်တိုးရီးယားလေးသည် သူတို့နဲ့ […]
July 3, 2019 MM Live News
၈၉ နှစ် အရွယ်အဖွားအိုကို (၇၁) နှစ်အရွယ် အဘိုးမှ မုဒိန်းကျင့် သက်ကြီး မုဒိန်မှု တရားခံ နံရိုးနဲ့ လက်ကျိုးအောင် ရိုက်နှက်ခံရ Wednesday, July 3, 2019 ထိုင်းတောင်ပိုင်း သရမ်ခရိုင်မှာ ၈၉ နှစ် အရွယ်အဖွားအိုကို အိမ်သားတွေ မရှိကြတဲ့အချိန် ရိုက်နှက် မုဒိန်းကျင့်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ မုဒိမ်းကျင့်တဲ့ တရားခံ Yap Chaiphak ရစ်ချိုင်းပတ် အသက် (၇၁)ဟာ အိမ်နီးချင်းတွေဖြစ်ပြီး သမီးဖြစ်သူအပြင် သွားနေတဲ့အချိန် အိမ်ရှေ့မှာ လဲအိပ်နေတဲ့ အဖွားရဲ့ဗိုက်ကိုထိုးကြိတ်ပြီး မုဒိန်းကျင့် ခဲ့ပါတယ်။ သမီးပြန်လာတဲ့အခါ အဖွားဟာ အော်ဟစ်ငိုနေပြီး ငရစ်ငါ့ကို လက်သီးနဲ့ ထိုးပြီး မုဒိန်းကျင့်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်၊ မီးက တရားခံ […]
June 3, 2019 MM Live News
စစ်ကိုင်း ဇွန် ၃စစ်ကိုင်းမြို့ မြို့မဈေးကြီး၏ ၂၄ နာရီပျံကျဈေးအတွင်းဓားထိုးမှုဖြစ်ပွား။ စစ်ကိုင်းမြို့ မြို့မဈေးကြီး၏ ၂၄ နာရီပျံကျဈေးအတွင်း ဇွန် ၃ ရက်နေ့နံနက် ၆ နာရီက ဓားထိုးမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားရာ ဓားထိုးခံရသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးသေဆုးံခဲ့ကြောင်းသိရသည် ။ စစ်ကိုင်းမြို့ မိုးဇာရပ်ကွက်မြို့မဈေးကြီး၏ ၂၄ နာရီပျံကျဈေးဆိုင်တန်းဓားထိုးမှုဖြစ်ပွားကြောင်းသတင်းအရ မြ်ို့မစခန်းမှူး ဒုရဲမှူးခိုင်စိုးထွန်းနှင့်အဖွဲ့ မိုးဇာရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသိန်းဝေနှင့်အဖွဲ့တိုသည် သက်သေများ…. နှင့်အတူသွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရာ ပျံကျဈေးတန်းတွင် အမဲသားရောင်းသည့် မဇင်မာဝင်း( ခ) မိမဲ အသက် ၃၂ နှစ် (ဘ) ဦးကိုဦးမွတ်စလင်/အစ္စလာမ် ပန်းဘဲတန်းရပ် စစ်ကိုင်းမြို့နေသူသည် ရင်ညွန့်/ ဝမ်းဗိုက်/ဝဲပေါင်ရင်း /လည်ဂုတ်/ထိုးသွင်းဒဏ်ရာများ ဝဲတံတောင်/အောက်နှုတ်ခမ်းပြတ်ရှဒဏ်ရာများဖြင့် လဲကျနေသည်ကိုတွေရှိရ၍ သုခကာရီလူမှုကူညီရေးအသင်းသို့ အကြောင်းကြားပြီး လူမှူကူညီရေးအသင်းကားဖြင့် စစ်ကိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်စဉ် လမ်း၌သေဆုးံသွားခဲ့သည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ သေဆုးံသူ မဇင်မာဝင်း(ခ)မမိမဲသည် ၂၄ နာရီပျံကျဈေး၌ […]
(၁.၆.၂၀၁၉) ApannPyay ( 1.6.2019 ) ဒီနေ့ထွက်ရှိသော (၄) ကြိမ်မြောက် သိန်းတစ်သောင်းခွဲ အောင်ဘာလေထီ ကံထူးရှင် ထွက်ပေါ်လာပါပြီ။ ( 1.6.2019 ) ဒီနေ့ထွက်ရှိသော (၄) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ သိန်းတစ်သောင်ခွဲ ကံထူးရှင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် မြရည်နန္ဒာမြို့သစ် ဗ၂၃ ရပ်ကွက်မှ “ပွင့်သစ်” ကွမ်းယာဆိုင် ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ ကိုဝင်းကျော် မှ အောင်ကုဋေဟိန်း ထီဆိုင်ကြီးမှ ထိုးယူပြီး ကံထူးစွာ ဆွတ်ခူးရရှိသွားကြောင်း သိရှိပါသည်။ ApannPyay (၁.၆.၂၀၁၉) ApannPyay ( 1.6.2019 ) ဒီနထှေ့ကျရှိသော (၄) ကွိမျမွောကျ သိနျးတဈသောငျးခှဲ အောငျဘာလထေီ ကံထူးရှငျ ထှကျပျေါလာပါပွီ။ ( 1.6.2019 ) ဒီနထှေ့ကျရှိသော (၄) […]
1.6.2019 (၄)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် (ကျန်ဆုများ ဒီ Post အောက်မှာပဲ ထပ်ပေါင်းတင်ပေးပါမည်) သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ကခ ၅၅၅၂၈၁ သိန်းတစ်သောင်း င ၂၄၈၈၄၅ သိန်းငါးထောင် ဋ ၃၂၃၉၉၈ မ ၉၅၉၄၇၃ သိန်းနှစ်ထောင် ဓ ၉၅၄၆၈၀ ကစ ၅၀၇၆၉၉ ဘ ၃၇၂၇၄၂ ကဇ ၆၆၃၅၆၀ သိန်းတစ်ထောင် တ ၉၅၀၄၆၆ ဇ ၈၇၅၅၉၁ ကက ၇၃၅၈၇၁ ဍ ၃၇၅၃၆၈ ဒ ၂၀၅၂၆၃ ဆ ၆၂၄၈၀၀ ဝ ၇၉၈၆၃ သိန်း(၅၀၀) ဟ ၈၅၄၇၃၆ ဝ ၆၅၆၂၃၄ ကဆ ၅၉၅၀၃၁ ဓ ၈၇၀၅၈၆ ယ ၈၅၆၁၅၃ ဘ […]
မင်္ဂလာပါ တိုယိုတာ Facebook ပရိသတ်များခင်ဗျာ! ကျွန်တော်ကတော့တိုယိုတာမော်တော်ကော်ပိုရေးရှင်းရန်ကုန်ရုံးရဲ့ အမှုဆောင်ကိုယ်စားလှယ်ချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ လူကြီးမင်းများရဲ့ တိုယိုတာကို ယုံကြည်ချစ်ခင် အားပေးမှုကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စီမံကိန်းအသစ်ကို အသိပေးခွင့်ရတဲ့အတွက် အထူးပင်ဝမ်းသာမိပါတယ်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို တိုယိုတာမော်တော်ကော်ပိုရေးရှင်းမှ အောက်ပါတရားဝင်ထုတ်ပြန်စာမှာ ကြည့်ရှူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်တိုယိုတာစက်ရုံတည်ထောင်မည်ဖွံ့ဖြိုးလာသောမြန်မာ့မော်တော်ယာဉ်ဈေးကွက်တွင် Toyota Hilux ယာဉ်များပြည်တွင်း၌တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်မည် တိုယိုတာစီးတီး၊ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ၂၀၁၉ခုနှစ် မေလ(၃၀)ရက်။ တိုယိုတာမော်တေ်ာကော်ပိုရေးရှင်း(တိုယိုတာ) အနေဖြင့်၎င်း၏ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပထမဦးဆုံးသော မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည့် တိုယိုတာမြန်မာ ကုမ္ပဏီလီမီတက် (Toyota Myanmar Co., Ltd, TMY) ကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ကာ ပြည်တွင်း၌ Toyota Hilux အမျိုးအစား မော်တော်ယာဉ်များအား တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ့စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှု နှင့်အညီ ပြည်တွင်းဈေးကွက်အတွင်း မော်တော်ယာဉ်အသစ် ဝယ်လိုအားမှာ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း တစ်ဟုန်ထိုး […]